Toyota Probox 2007 (#693936) ကို Hlaing ၿမိဳ့နယ္တြင္ေရာင္... | CarsDB
Lot Number: #693936
Engine Power. :1500 CC,2wd
Equipment. :PS,Power Window ၁ချပ် ABS,Airbags,နောက်မှန် ၅ချပ်မဲ,နောက် wiper
Price. 195 : သိန်း
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Zin Yaw Phyu Automobile မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Probox 2007 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။